अमेरिकी युवतीको कुमारीत्व बिक्रीमा ?::SamajikPatra
अमेरिकी युवतीको कुमारीत्व बिक्रीमा ?
एजेन्सी । पैसा र एडभेन्चरका लागि अमेरिकामा एक युवतीले आफ्नो कुमारीत्व लिलामीको घोषणा गरेकी छन् । उनले वेभसाइटमार्फत लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेकी हुन् । ३१ मार्चबाट सुरु भएको उनको यो अनलाइन लिलामी प्रक्रिया ७ मेमा सकिने छ ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी तीन करोड ३१ लाख ९८ हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने भेटिएका छन् । वेभसाइटका अनुसार जुन युवतीले आफ्नो कुमारीत्व लिलामीमा राखेकी छन् उनको नाम एलिजाबेथ राइने हो । २७ वर्षीया राइने मेडिकलकी छात्रा हुन् । लिलामीका लागि राखिएको तस्वीरमा भने उनको अनुहार छोपिएको छ ।
बढी पैसा कमाउन पछि उनले अनुहार देखाएकी थिइन् । उनले आफ्नो अनुहार देखाएपछि उनको मूल्य करिब पौने दुई करोड बढेको थियो । राइनेका अनुसार उनी कुमारीत्व लिलामीका लागि विगत ६ वर्षदेखि सोचिरहेकी थिइन् । यसक्रममा उनले देहव्यापार, भर्जिनिटीका बारेमा अध्ययन गरिन् ।
उनका अनुसारयो सबै उनी भर्जिनिटीसँग सम्बन्धित आदर्शलाई चुनौति दिन गरेकी हुन् । अमेरिकामा वेश्यवृत्ति कानुनी रुपमा अपराध हो । त्यसैले लिलामीसँग सम्बन्धित लेनदेन अस्ट्रेलियामा पूरा गरिनेछ । लिलामी जित्ने व्यक्ति र एलिजाबेथबीच कानुनी सम्झौता हुनेछ ।
महिला पत्रकारलाई लाइभ रिपोर्टिङमै किस गरिदिएपछि…
लोग्नेले बढी माया गरेको भन्दै पत्नीले मागिन् डिभोर्स
एउटा यस्तो गाउँ जहाँ कुरा काट्न बन्देज, कुरा काटे जरिवाना तिर्नुपर्ने ?
धरहराका इँटा होटल र रेस्टुरेन्टमा प्रयोग
जापानले बनाइदिएको भवन वीरले प्रयोग गरेन, बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य
घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिइने
सागमा नेपाललाई एकैदिन १५ स्वर्ण (हेर्नुस सुची)
१० करोड घाटा भएपछि बुद्ध एयरले गर्‍याे कोलकाता उडान बन्द
उपनिर्वाचनकाे समीक्षा गर्दै देउवा : हामी बलियो बन्दै छौँ
केपी ओलीलाई प्रचण्डको नेतृत्व अस्विकार, पूर्व माओवादीमा तरङ्ग
सरकारले दिएको अल्टिमेटम बिरुद्ध मेडिकल कलेजले दियो जवाफ, अब के गर्ला सरकार ?